Antenimierampirenena: lany tsy nisy nitsipaka ny Tetibola 2021 | NewsMada
Antenimierampirenena: lany tsy nisy nitsipaka ny Tetibola 2021
Raha ny fandaharam- potoana, dinihina mandritra ny roa andro amin’ny fivoriambe ho an’ny daholobe ny Tetibola 2021 (LFI) teny amin’ny Antenimierampirenena. Tsy izay anefa no narahin’ireo depiote, fa novitaina tao anatin’ny adiny roa (7ora hariva-9 ora alina) ny fandaniana azy, ny zoma 27 novambra teo. Niisa 97 ny solombavambahoaka nandany ny LFI 2021. Nivoaka ny efitrano fivoriana, tsy nandany ity LFI 2021 kosa ny vondrona Tim. Amin’izy ireo, tsy ampy ny fotoana tokony nandinihiana ity tetibola ity, nefa maro ny zavatra azo lazaina aminy.
Tsy nisy novana ny andinin-dalàna voalaza tao anatiny, afa-tsy ny fandoavana haba TVA amin’ny vidin’ny volamena ihany. Raha ny fanazavan’ny minisiteran’ny Tetibola, hatao hampirisihina ny mpitrandraka eto an-toerana ny antony hanafoanana ny TVA ho an’ny volamena. Tsiahivina fa manana paikady vaovao hananganana tahirim-bolamena ny Banky foiben’i Madagasikara.
Anisan’ny fanamby napetraka ao anatin’ny LFI 2021 ny fitomboan-karena +4,5% amin’ny taona 2021. Tsinjo dieny mialoha koa anefa fa hitohy ny fihenan-danjan’ny Ariary, hanodidina ny 4.000 Ar ny 1 dolara, izay efa misanda 3.777 Ar, ny zoma 27 novambra teo.